Guddoomiyaha KULMIYE oo ka Qaybgalay Khudbado Prof. Axmed I.Samatar Ka Jeediyey Xarunta Dhaqanka – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor)- Guddoomiyaha xisbul xaakimka KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka qaybgalay kulan si weyn ay uga soo qayb-galeen dhalinyaradda Jaamacaduhu oo Khudbad aqooneed caawa ka jeedinaayey Prof. Axmed Ismaaciil Samatar oo dhawaan dalka ku soo laabtay.
Kulanka oo caawa ka qabsoomay xarunta Dhaqanka ee Hargeysa waxaana ka soo qayb-galay kumanaan dhallinyaro ah aqoonyahan rag iyo dumarba, waxaanna dhallinyartaasi ku wehelinayey madashaasi Guddoomiyaha, ahna murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Md. Muuse Biixi iyo xubno ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga.
Prof. Axmed Ismaaciil Samatar khudbadan caawa waxaa uu sharaxaad dheer ka bixiyey Dhaqanka wanaagsan ee bulshada Soomaalidu leedahay iyo dhinacyada kala duwan ee uu ka kooban yahay. Qudbada oo ahayd mid aad u xiiso badan oo aad ula dhaceen dhalinyaraddii ka soo qayb-gashay madashan, waxaana markii khudbadu dhamaatay ay ka soo qayb-galayaashu Professor-ka waydiiyeen. Khudbaddan iyo su’aalaheeda ayaa socotay muddo saddex saacadeed iyo badh ah.
Prof. Axmed Ismaaciil Samatar ayaa ku tilmaamay ka soo qayb-galka gudoomiye Muuse khudbadiisan inay qadarin iyo qiimayn uu u sameeyey Guddoomiyuhu tahay, sidoo kalena dhallinyarada aqoonyahanka ee madasha isugu tagtay ayaa rayn-rayn iyo sacab qiimo badan ku qaabilay murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE markii uu goobta tagay.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Oo Kulan La Yeeshay Haayada ARC